China isagreat soc - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: china isagreat socialist country (英語 - ビルマ語)
ထာဝရဘုရားသည် ကြီးမြတ်သောဘုရား၊ ဘုရားတကာတို့ထက် ကြီးမြတ်သော ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။
ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီနှင့် ယှဉ်သောဥစ္စာအနည်း ငယ်သည်၊ မတရားသဖြင့်ရသောဥစ္စာ အများထက်သာ၍ ကောင်း၏။
နိနေဝေမြို့နှင့်၊ ကာလမြို့စပ်ကြားမှာ ကြီးစွာသော မြို့တည်းဟူသော ရေသင်မြို့ကို၎င်း တည်ဆောက် လေ၏။
It has attractedagreat attention since published.
ထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းက လူအများ၏ အာရုံစိုက်မှု ရခဲ့ပါသည်။
ဤအရာသည် အလွန်နက်နဲသောအရာ ဖြစ်ပေ၏။ ထိုသို့ငါဆိုသော်၊ ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော် ကိုရည်မှတ်၍ဆိုသတည်း။
အကြောင်းမူကား၊ အမြင့်ဆုံးသော ထာဝရ ဘုရားသည် ကြောက်မက်ဘွယ်သောဘုရား၊ မြေကြီး တပြင်လုံးကို အစိုးရသော မဟာမင်းကြီးဖြစ်တော်မူ၏။
အလုပ်လုပ်သောအခါ ပျင်းရိသောသူသည်၊ မိမိဥစ္စာကို အချည်းနှီးကုန်စေသော သူနှင့်ညီအစ်ကို တော်ပေ၏။
China: Is Mo YanaStooge of the Chinese Government? · Global Voices
မို​ယန်း​က တရုတ်​အစိုးရ​ရဲ့ ရုပ်သေး​ရုပ်​လား
it isapressure like chest pain
အဲဒါဟာ ရင်ဘတ်အောင့်သလိုမျိုး ဖိအားမျိုးဖြစ်တယ်။
ယေရိခေါမြို့မှ ထွက်သွားကြစဉ်တွင် လူများအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။
Water in India isaparadox.
မြင်းသော်လည်း ဘေးလွတ်ခြင်းအမှုကို မတတ် နိုင်။ ကြီးစွာသော ခွန်အားဗလဖြင့် မကယ်ယူနိုင်။
ငါတို့သည် သင်တို့၌ ဓမ္မမျိုးစေ့ကို စိုက်ပြီးမှ သင်တို့၏လောကီအသီးကို သုံးဆောင်လျှင် ကျေးဇူးကြီး မည်လော။
aras gelis (トルコ語>英語)azo (デンマーク語>スペイン語)rovings (英語>ロシア語)certifikátu (チェコ語>タミル語)numa (スウェーデン語>英語)säkerhetsutbildningen (スウェーデン語>英語)kaunis tyttö (フィンランド語>エストニア語)halvfabrikat (デンマーク語>英語)indian bf in hindi (英語>ヒンズー語)post nubila phoebus (ラテン語>英語)subdelegowany (ポーランド語>チェコ語)niloloko mo ba ako bakit mo ngagawa saakin yan (タガログ語>英語)palatine (フランス語>日本語)cefndir (ウェールズ語>フランス語)bran (英語>アラビア語)culpa (スペイン語>イタリア語)domæneværdiliste (デンマーク語>リトアニア語)bkc gali ka matlab (ヒンズー語>英語)lindo te adoro (スペイン語>英語)me gustaría conoserte en persona (スペイン語>英語)pang iinsulto (タガログ語>英語)para ihatid si mama (タガログ語>英語)what's your impression of the united states (英語>ロシア語)الملاحظة (アラビア語>スペイン語)robert pelewicz (ポーランド語>英語)